Maqaal: Qiblada Qabbaaniyaasha!
Qiblada Qabbaaniyaasha! Maahmaah Soomaaliyeed ayaa tiraah: “Biyo ururo meel godan ayay isugu tagaan” mid kalene waxay leedahay: “Geel tegay tubihi ceel” mid kalena waxay ahayd: “Biddoow anigu ku sheegayee, yaan camalkaagu ku sheegin”.
Sida qarankii u qallibmay, waxaa Soomaaliya loo qabtay dhawr shir, dhammaan ku suntanaa nabadeyn, waxaase jiray qaar loogu yeeray wadatashi, aanse nabaddu marna ka marnayn, dabcan nabaddu waa nudubka nolasha iyo naruuradeeda, Soomaalise naawili waysay, hadday ka dhigatay halqabsi iyo warcelinta koowaadba “Nabad ma sheegtay? Ama ma jirtaa? Waa nabad” nolosha ayaa rajo ku dhisan, horay u hanqaltaagguna waa halbeegga noolaha, ma quusto, is mana dhiibo, wuxuu ku hawllan yahay huleel iyo hawl, hadalkuna waa hawraarta hadranka.
“Baho Higle kalgacalna ku kali tagi waaye, af qarmuunina ku wada joogi waaye” shir nagama dhammaado shayna nooma hagaago, sanadkii la soo dhaafay waxaa la qabtay ugu yaraan 3 shir, waxaa ka badanaa kuwa magaca Soomaali ku sheeganaa, ee aynu wada ognahay in aysan shaahidka ka ahayn.
Qormadan waxaan uga hadlayaa Qiblada Siyaasi ku sheegga Soomaaliyeed. Inta badan dunida Carabta ayaa lagu dhaliilaa in Washington looga taliyo, ayna tahay lama huraanka madaxa Carbeed, uu booqda Maraykanka sanadkii dhawr kol.
Dabcan waa dawladda dunida ugu awoodda badan dhan walba, dano xoogganna ka leh gobolka Bariga dhexe, waxaaba ku taal gobol ka mid ah gobollada Maraykanka “Israel” oo marar badan ay ugu garbisay gardarro qaawan, waana meeshuu Abwaan Cali Diiriye “Cali Gaab” ka yiri:
Israel Ma booddeen
Bari dhexe intuu tagay
Nabad kuma bariisteen
Waa Boqol Yuhuuddiyo
Beerka u firaayaa
Barqa laguma gaareen
Waxaan loo bannayn iyo
Bakhti kuma dhex kariyeen
Been weeye Nabadduye
Buntuq weeye dunidiyo
Isa soo bahaystoo
Ninkii Baal u leexda
Basar wax ugu sheegoo
Ku ballama dagaal.
Sida Carabta meel gaar ah looga xakumo, ama ay ugu qiblaystaan, ayaa annaga dhankeena Siyaasi isku sheegga Soomaaliyeed, wuxuu leeyahay qiblo u gaara, wanaag iyo wacanaan laguma sheegin, deeqsinimo iyo dadnimo loogama baran, karti iyo kasmo laguma yaqaan, xigmad iyo xeelad laguma xusin, xeer iyo xukun wanaagsan laguma xisaabsho, xaalad degganaan iyo xirfad sare looguma xiiso, xasad iyo xaqdi ayey xero u tahay, xalqo Daafi iyo xibin qiiriin cun laguma xadido, waxba yaanan xeerine, waa XABASHI QIBLADDA QABBAANIYAASHA SOOMAALI!
Burburinta dawladdii dhexe, duullaanka waxaa laga soo qaaday, oo beel walbaa dabada la gashay xerada Daafi qurunleeyda, haddii dalkii burbur galay, jabhadihiina dagaallo dhexdooda ah ku hoobteen, waxaa xilligaa lagu qabtay shir sanaddii 1993-dii oo ka dhacay Addis Ababa. Sanado ka dibse iyadoo udbaheeda wadata ayey wadanka soo gashay, yaa u sabab ah? Dad badan yaa aaminsan qabqablayaal reer Gedo ahaa, maya, sidaa ma ahan Alshabaabta hadda joogta oo shaar kale wadatay ayaa sabab u ahayd, ka dib markii ay dadkii deegaanka dhibtay.
Muddo gaaban ka dibse, waxaa caadi noqotay in Xabashida xabado loo doonto, si weyn waxaa caan ugu ahaa Qabqablayaasha Xamar kala xadeeyey, dabcan Somaliland qurbaankeeda ha moogaan, dad noolba ha u badnaadee, gadaaalna ay uga soo biirtay Puntland, qabqablayaashu waxay si gaar ah ugu eedaysnaayeen, inay Xabashida qodban yihiin, qabbir iyo qoolna ugu jiraan, waxaanse la eegayn inaan la kala roonayn, waase dabaceedda Soomaalida, oo la yaab ma lahan.
Waxaa la yaab ah, markii hore qabqablayaasha ayaa lagu cayn jiray inay Itoobiya ka soo qaataan hub ay shacabka ku laayaan, ama ay u kala dhuuntaan si mid walbaa ugu qanciyo inuu fulinayo awaamirtooda, maanta waxaan maraynnaa in wadaadadiina u kala dhuumanayaan Itoobiya, waliba ay iyaga oo faraxsan oo dhoolla caddaynaya ka dagayaan Addis si ay shir dib u heshiisiin ah uga qaybgalaan, midkan kaliya ma ahan, waxaaba jiray mid dhexdooda loo qabtay, waa yaabe duf ku baxayaashu miyeysan wax is dhaamin, qabqable iyo wadaad mid walbaa waa kiisa kale, waa labada bog ee lacagta oo kale!
Waxaa hubaal ah, inaan daawadayaal ka nahay filimada jilayaasha Soomaalida ee ku qanacsan magacyo la moodka loo hilaabay, ma mooddaa sidii jilayaashii aflaanta, ee marba kaalinta shirkadda filimka soo saaraysaa u soo doorto buuxin jiray? Madaxweyne, Askari, Dhakhtar, Jabhad, Dulmane, Daallin, Dammane IWM miyaanay magacya la moodka Soomaalidu sidaa ahayn? Maadaama aan leenahay hal marjac oo aan la garab mari karin?.
Maanta waa maalin kale, waxaa Addis Ababa ku shirsan madax ku sheegga Soomaalida, kaliya waxaa ka maqan Siilaanyo, oo malaha asna u baaqday damaashaadka maalmaha Xoriyadda, balse, mardhaw laga filayo shir ka dhacaya magaalada London, si loo billaaba wada hadallo u dhaxeeya DKMG ah iyo Maamulka Siilaanyo, ka dib markii DMKG ah ka saartay xubnihii Faroole ku soo darsaday guddiga, ee awalba carqalad kaliya looga jeeday.
Shirkan Addis ka furan wuxuu ku yimid, waraaq si lama filaan ah mudane Faroole ugu diray kuwan lagu sheego inay daneeyaan arrimaha Soomaaliya, kuna sheegay inuu dastuurka qaadacay, ayna tahay shir la isugu yimaado Kenya ama Ethiopia, xasuuso, xeerku wuxuu ahaa qofkii diida dastuurka inuu nabaddiid yahay! Gaas ayaa ugu hormaray, kuna tilmaamay diidmada Faroole mid u gaar ah, oo dadka kale ee diiddan Dastuurka inay u gaar noqoto, maxaa reebaya? Faroole waa u gaar, inta kalana waa ka gaar, ani ma garan, ee qofkii gartay ha noo garaadiyo.
Shisheeye u baaqa Faroole kali kuma ahan, ee waa meeshuu Cigaal Shidaad ka yiri: “Waa la buuxaa, waa la badan yahay” waaba iga weydiine, saw lama lahayn; Garoowe ayaa xarun shirar isu badashay, maxaa keenay inuu Faroole soo hadal qaadi waayo? Ma halmaamin baan filaaye, mise maadaama uu cabashadaba u gudbiyey shisheeyaha, waa in shisheeyuhuna gogosha dhigaa, kaliya ma ahane, waa inayba go'aamiyaan waxa ka soo bixi doona, si aan u dhicin in cabashadii meel cidla ah ku dhacday.
Is weydiinta mudan ayaa ah, haddii Faroole ka dhaga adaygay, in shirka Muqdisha lagu qabto, maxaa shalay loogu firxanayey Garoowe? Illeen qofkii gogosho aad fidiso diidaa, inaad tiisa tagtaa waa taloxume, anigu ma garan Shalay Garoowe in sadbursi lagu go’aamiyo, maantana aan sinnaan Muqdisho wax u qaybsanno la diido, ee aqriste adi ma garatay? Run ahaan inay tahay meeshii laga oran jiray: “Bisayl iyo Qiireen waxa u dhexeeyaa waa yacyacood” haddaan laga dhigayn xaajada: “La jiifiyaana bannaan, la joojiyaanan bannaan”.
Aqriste, nabaddiid aan u laabtee, “QASWADE” ma la dhihi karaa, mudanihii ay xilka ka qaadeen intii u dooratay xilkaa in ka badan? haddana laga fujin waayey, isagu garaadkiisa kuma tagayo, garabna waa haystaa, waa “Gardarro garab og lagama guulaysto” garabka wuxuu ka helayaa canaasir ka tirsan madaxda sare ee dawladda, oo iyagu raalli uga ah inuu sii hayo xilkaa iyo shisheeye uu waligiiba u ahaa kabaqaade, illeen hadduusankalkaale u ahayn iyaba ma garab siiyeene.
Aqriste, middan si fiican iila dhuux, waxaan is leeyahay waaba midda ugu muhimsan inta aan soo xusay, “QASWADE” ma la dhihi karaa, kuwan wadanka ku soo hogaamiyey shisheeyaha? Bal wadanka gees ka gees eeg, maanta gobol aan Xabashi joogin ma lahan, Somaliland iyo Puntland iyagu qurbaanka si joogto ayey u bixin jireen, koofurta deegaannada qaar ayaa Fiddaw iyo Xersi xir ahaan iyana u gayn jiray, hadda waxay maraysaa inaysanba sugan, ee ay ugu timaad meesha uu yaal, halkaana ka maamusho, kana yeesho sida ay doonto.
Madasha waxaa ku sugan Shariif oo carriga Maraykanka ka imaanaya, markii horana ka sii duulay Uganda, Tahliil ayuu horay u sii qadanayey malaha. Faroole oo codsadaha shirkan ah, isna wuxuu ka imaaday dal shisheeye, Caalin isaguna iyo Gaas oo Muqdisha ka soo duulay, Shariif Sakiin wuxuu ka soo duulay Baydhaba Jannaay, oo ayaamahaanba sidii Shimbir Malabkii ugu dul wareegay sanayey, malaha wuxuu is leeyahay marka aad ku qaddo guddoonka baarlamaanka yaan lagugu qabsan? Xerta Ahlusunna, sidii qaruxu Dhuusamareeb uga dhacay, warkoodba lama hayn, awalba waxay ahaayeen dhal Amxaaro, haddana waxaa ku sii dhacday dhallaan la'aan.
Aqriste, bal maanee kuwii isku sheegayey inay yihiin hoggaanka dalka, maamul gobol iyo maamul guudba, waxay ku horan yihiin xerada Xabashida? Alla ayaan darro ka weyn miyaa jirta? Mid ma is leedahay in halkooda looga dhaadhiciyo xabsi, ay ku jiraan inta Soomaaliya ka hagaagayso? Sidii uu sameeyey madaxweyne Anwar Al sadaat, ka dib markii uu martiqaad u fidiyey madaxdii ku murun saneyd maamulka wadanka Yemen, qabqablayaashii dhanna xabsi ku ururshay, deedna maamul iyo hoggaan cusub u dhisay, Wallee middaa oo kale waa nagu fiicneyd, ma ahan kaligood, ee xayn badan ayaa magaalooyinka lafaysanaya, iyagana yaan laga reebin.
Wax badan yaad maqasheen eraga ah: “XABASH YAHOW XABASHKU DHALAY” qofkii eragaa lagu yiraa caayi uma dhimanayn, nasab dhimid iyo bahdil ka weyni ma jirin, maantase qofkaan ahayn sida eragu yahay, waxna ma ahan, waxna ma noqon karo, xil iyo xukunna waa ka xaaraan.
Aqriste, bal eeg sida waayuhu isu badaleen? Maanta inaad dhal Xabash noqotaa waa ammaan iyo arrin wanaagsan, illeen waxay kuu suuragalinaysaa inaad xaraan ku naax noqotood quudatid hanti guud iyo midda gaare, adoon marnaba ka baqayn dabagal iyo xisaabi xil ma leh!
Aqriste, haddaad markii hore aamin sanayd, in wadanka Soomaali maamusha, maantaba indhaaga ku arag, wixii aad aamin sanayd iyo waaqica isu eeg, waan filaa inay kaaf iyo kala dheeri tahay, maxaa yeelay dunida kama jirto, wadan madaxdiisa oo dhan looga yeerayo wadan shisheeye, ee haddana isku shubaya, sidii inay Alla bari ka qaybgalayaan, shirkani wuxuu caddayn u yahay inaan wax madax bannaani ahi jirin, qofkii mid ka duwan hayaa, ha soo bandhigo, isagoo mahadsan.
Sida aysan dunida uga jirin dhacdada caynkaa ah, ayey Soomaaliya caadi ka tahay, kuwa u sii cararaya iyo kuwa codsaday waxaaba ka sii liita, kuwan Odoy dhaqameedka lagu sheegayo, dushooda iyo diirkooda lagu dul gorgortamayo, Alla damiir dhintay ee dux beelay illeen dadnimo lagama sugo! Markii ay dhihi lahaayeen, anaga maxaad noogu wacateen haddii aysan taladu naga go'in? Ayaa qaarna dib u carooday ka dib markii amar lagu siiyey, qaarkii harana HOOS GUNTIYO ku maqsuudeen, hoos iyo hareerba ma hillaaban, heegada sarana warkeedba daa.
Meel aan lagaa rabin indhaha lalama si raaco
Kaligood ma ahan, bal eeg kuwa aqoon yahanka isku sheegaya, inay idaacadaha iyo TV-yada ka quuq leeyaan ma ahan qaab kale keeni waaye, ka dar oo dibi dhal, waxa marashax isku sheegaysa ee maalinba maalinta ka sii dambaysa haddan aan lagu hayn hale ra’yi oo ku aaddan waxaan dhacaya iyo wadankaan mugdiga sii galaya, ee ay doonayaan inay madax u noqdaan, Doqoneey dabkaa ba’. Abwaan Soomaaliyeed ayaa hore u yiri: “Ma dumaalo naagaha ninkay nolol ku deyrshaane” Abwaan kalena waxuu yiri: “Dundumooyinkoo lala hadlaa damac ma yeeshaan”.
Waxaa ka sii liita, inta madax iyo maamul urur ku jira u ah, Hiil Qaran, Daljir, Tayo IWM, qaar gudahaa lagu aasaasay, qaarna dibadda laga suu unkay, kase wada siman inay yihiin hiil iyo hoo la’aan, hubaal inay tahay maalin loo baahnaa in la maqlo codkooda, hase yeeshee ka door biday inay u kuur galaan siday madaxtooyada ku gali lahaayeen.
Waxaa ka sii liita wadaaddo wax ay bulshada ugu qaybsan yihiin aan la garayn, mid inta Puntland ku soo ansixiyey Dastuur beeleed, maalintuu Garoowe ka soo duulay ee Xamar yimid diiday dastuurka Soomaaliweyn lagu badbaadinayo, aqriste ma is qabanaysaa? waxaa la mid ah Sheekh Ummal oo yiri; “inta dastuurka rabta dantooda ayey ka arkeen, inta diidanna dantooda ayey ka waayeen” waaba iga su’aale wadaadkani miyuusan ka waantoobin inuu Soomaali mar walba meel uga dhoco? War qofkii yiri; qodabka Jinsiyadda, Xuduudaha wadanka, Federalka, Caasimadda, iyo inuuba ku meel gaar yahay awgiis ayaan ku diidayaa, ma dantiiisa gaarka ah ayuu ka waayey? Waxaa kaloo la mid ah Shiikh Dhicisaw, oo aan la garanayn waxa uu u doodayo iyo waxa uu ka doodayo, waxa uu diidayo iyo waxa uu doonayo.
Dhaqan iyo dhur midna lama dhawrin, qaanuun iyo qodob midna lama qaabin, xeer iyo
xukun midna lama xigan, maan iyo maskax midna lama maarayn, xil iyo xushamad midna lama xusin, xaq iyo xero midna lama xeerin, waxaa la yaab ah meesha wax ku dhammaadeen, halka la taagan yahay iyo sida xaalku ku dambayn doono.